Four Zimbabwe generals retired in Mnangagwa's first axe of military. - Jambo News Network
Four Zimbabwe generals retired in Mnangagwa’s first axe of military.
Zimbwabwe president Emmerson Mnangagwaretired four generals on Monday, in the first major shake-up of the armed forces since he took office and including the man who led a deadly crackdown against post-election protests in August.
The quartet’s removal also coincided with the absence abroad of Vice president Constatino Chiwenga the retired general responsible for ousting former president Robert Mugabe in November 2017 and now widely viewed inside the country as the power behind Mnangagwa’s administration.
According to Zimbabwe government spokesman all four generals will be appointed to diplomatic posts overseas in line with Zimbabwe’s “critical global engagement and re-engagement strategy,” said.